နောင်တမလွန်ဘဝရှိသလား? | Shwe Canaan TV
00Truth Sunday,9September 2012
နောင်တမလွန်ဘဝရှိသလား?။ သမ္မာကျမ်းစာက “လူသည် မိန်းမ ဖွားသောသူဖြစ်သဖြင့် အသက်တို၍ ဒုက္ခနှင့်ပြည့်စုံပါ၏။ ပန်းပွင့်ကဲ့သို့ပွင့်၍ ရိတ်ဖြတ်ခြင်း...
နောင်တမလွန်ဘဝရှိသလား?။ သမ္မာကျမ်းစာက “လူသည် မိန်းမ ဖွားသောသူဖြစ်သဖြင့် အသက်တို၍ ဒုက္ခနှင့်ပြည့်စုံပါ၏။ ပန်းပွင့်ကဲ့သို့ပွင့်၍ ရိတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရပါ၏။ မတည်မရပ်ပဲ အရိပ်ကဲ့သို့ ရွေ့သွားပါ၏ လူသည်သေလျှင် အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည်လော။ အကျွန်ုပ်ပြောင်း လဲချိန်မရောက်မှီ ပင်ပန်းစွာအမှုထမ်းရသော နေ့ရက်ကာလပတ်လုံးသည်းခံ လျက်နေပါမည်” (ယောဘ ၊ ၁၄း၁၊ ၂၊ ၁၄)။
ဤမေးခွန်းကစိန်ခေါ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သေဆုံးသွား ပြီးနောက်မည်သည့်အရာမျှတိကျစွာဖြစ်ပျက်နေပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သေသည်နှင့်တပြိုင်နက် ဘဝရပ်သွားပါ သလား။ သေခြင်းတရားသည် ဘဝသံသရာ လည်ပတ်ရန်နှင့် နောင်ဘဝတွင် ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်ရန် တံခါးပေါက်ဖြစ် သလား။ လူသား အားလုံးသည် နေရာတစ်ခုသို့သွားရမည်လား။ သို့မဟုတ် မတူညီသောနေရာသို့သွားရမည်လော။ ကောင်းကင်သုခဘုံနှင့် ငရဲမီးအိုင်တို့သည် အမှန်တကယ်ရှိသလား။ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သည် စိတ်အာရုံခံစားချက် သာဖြစ်သလား။
နောင်တမလွန်ဘဝသာမက ဘုန်းကြီးသော ထာဝရအသက် ရှိကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာကဖော်ပြ ထားပါသည်။ ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီ “ဘုရားသခင်ကို ချစ်သောသူတို့အဖို့ အလို့ငှာ၊ ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူ သောအရာတို့ကို လူ့မျက်စိဖြင့် မမြင်၊ နားဖြင့်မကြား၊ စိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစည်သေး” (၁ကော ၂း၉)။ သခင်ယေရှုခရစ် တော် ဘုရားသခင်သည် လူ့ဇာတိကိုခံယူလျက် ဤထာဝရအသက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်ရန် ဤလောကသို့ ကြွလာခဲ့သည်။ “ထိုသူသည် ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့် နာကျင်စွာထိုးခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏။ ငါတို့၏ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းကို သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍ သူခံရသော ဒဏ်ချက်အားဖြင့် ငါတို့ သည်အနာပျောက်လျက်ရှိကြ၏ (ဟေရှာယ ၅၃း၅)။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထိုက်တန်သော ပြစ်ဒဏ်အားလုံးကို သခင်ယေရှုက ယူဆောင်သွားခဲ့၍ ထိုအပြစ်တရားအတွက် သခင်ယေရှုက မိမိအသက်တာပေးဆပ်ခဲ့ပါသည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် သခင်ယေရှုသည် သချုႋင်းတွင်းမှ ဝိညာဉ်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် သူသည်သေခြင်းပေါ်တွင် အောင်မြင်ရကြောင်း မိမိကိုယ်ကို ပြသခဲ့ပါ သည်။ သူသည်သူ၏ အိမ်တော်ဖြစ်သည့် ကောင်းကင်ဘုံသို့မတက်မှီ ရက်ပေါင်းလေးဆယ် ဤလောကတွင် နေထိုင် ခဲ့ပြီး ခရစ်တော်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို လူထောင်ပေါင်းများစွာက သက်သေထူခဲ့ပါသည။်ရောမ ၄း၂၅ က ထိုသခင်ယေရှုသည်ငါတို့အပြစ်ကြောင့် အပ်နှံခြင်းကိုခံတော်မူ၏။ ငါတို့သည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်မည်အကြောင်း ထမြောက်တော်မူ၏ ဟုဖော်ပြထားသည်။
ခရစ်တော်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် မျက်ဝါးထင်ထင်ဖြစ် ပျက်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ် သည်။ ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ငြင်းဆိုမရသော မေးခွန်းမေးမြန်းရန် မလိုအပ်သောအဖြစ်အပျက်ဖြစ် သည်ဟု တမန်တော် ရှင်ပေါလုကပြောခဲ့ပါသည်။ ဤသမ္မာတရားဖြစ်သော ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို မည်သူကမှ မငြင်းပယ်နိုင်ပေ။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတရား ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းအတွက် အလွန်အရေးကြိးသော တရားဖြစ်ပါ သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့၍ ထိုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ထမြောက် မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထမြောက်ခြင်းတရားကို မယုံကြည်သော ခရစ်ယာန်တို့ကို ရှင်ပေါလုက ဤသို့ချိုသာစွာ ကတိပေး ထားပါသည်။ ယခုမှာ ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှ ထမြောက်တော်မူကြောင်းကို ဟောပြောရသည်ဖြစ်၍ သေသောသူ တို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိဟု သင်တို့တွင် တချို့သောသူတို့သည် အဘယ်ကြောင့်ဆို ရကြသနည်း။ သေသောသူတို့ သည် ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင် ခရစ်တော်သည် ထမြောက်တော် မမူ(၁ ကေ၊ ၁၅း၁၂-၁၃)။
ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်သောသူများထဲတွင် အဦးဆုံးသောသူဖြစ်ပါသည်။ လူတစ်ဦး၊ အာဒံအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်သေခြင်းတရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ပေါ်တွင် သက်ရောက်သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုခရစ်တော် ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင် ၏ မိသားစုဝင်အဖြစ် အမွေခံသောသူတို့သည် အသစ်သော ထာဝရအသက်ကို ရရှိပါလိမ့်မည် (၁ ကော၊ ၁၅း၂၀-၂၂)။ ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထမြောက်စေ သည့်နည်းတူ ကျွနု်ပ်တို့ ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်း ခရစ်တော်တဖန်ပြန်လာသောအခါ ထမြောက်မည်ဖြစ် သည် (၁ကော၊ ၆း၂၄)။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်သို့ အတူတကွဝင်ရောက်ကြမည်မဟုတ်ပေ။ ထာဝရကာလစိုးစံနေရာသို့ဝင်ရောက်ရန် လူတိုင်းက ဤလောက တွင်အသက်ရှင်ချိန်တွင် ရွေးချယ်မှုပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတို့သည် တစ်ကြိမ်တည်းသေ၍ နောက်မှ တရားစီရင်ခြင်းခံရမည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာက ပြောထားပါသည်(ဟေဗြဲ ၉း၂၅)။ ဖြောင့်မတ်သော သူတို့သည် ထာဝရအသက် ရှင်သောနေရာ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ဝင်ရောက်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် မယုံကြည်သောသူတို့သည် ထာဝရ ပြစ်ဒဏ်ခံစားရသောနေရာ ငရဲမီးအိုင်ထဲသို့ ပစ်ချခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည် (မဿဲ၊ ၂၅း၄၆)။
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နည်းတူ ငရဲမီးအိုင်သည် ထင်ရာမြင် ရာတွေးတောနှုတ်မြွက် ခြင်းမဟုတ်ပဲ အမှန်တကယ်တည်ရှိသောနေရာဖြစ်သည်။ ထိုနေရာသည် မတရားသောသူတို့ကိုထာဝရအဆုံးမရှိသိုလှောင်သော နေရာ၊ ဘုရားသခင်၏အမျက်ဒေါသကိုထာဝရကာလခံစား ရသောနေရာဖြစ်သည်။ သူတို့သည် စိတ်ဖိစီးမှု၊ ဝမ်းနည်း ပူဆွေးမှုနှင့် ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်မှုတို့ကို ခံစားရ၍ ထိုမျှမကအရှက်ကွဲခြင်း၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း၊ ရွံ့ရှာမုန်းတီးခြင်းတို့ကို ခံစားရပါလိမ့်မည်။
ငရဲမီးအိုင်သည် အဆုံးမရှိသောတွင်းနက်ကြီး (လုကာ ၈း၃၁၊ ဗျာ ၉း၁) မီးမသေသောနေရာ၊ ကန်နှင့် မီးလောင်ကျွမ်းသောနေရာ၊ မတရားသောသူတို့သည် ထိုနေရာတွင် နေ့ညမပျက် ထာဝရကာလငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်း ခံစားရသောနေရာဖြစ် သည်( ဗျာဒိတ်၊ ၂၀း၁၀ )။ငရဲမီးအိုင်ထဲတွင် ငိုကြွေးခြင်းနှင့် အံသွားခဲကြိတ်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းပူဆွေး ကြောင့်ကြခြင်းတို့သာရှိသည် (မ၊ ၁၃း၄၂)။ ငရဲမီးအိုင်သည် “ပိုးမသေမီးမငြိမ်းသောနေရာ” ဖြစ်သည် (မာကု၊ ၉း၄၈)။ မတရားသောသူတို့၏သေခြင်း၌ ဘုရားသခင်သည် ဝမ်းမြောက်မှုမရှိပေ။ သို့သော် မတရားသောသူတို့သည် ထာဝရ အသက်ရရှိရေးအတွက် မိမိအပြစ်မှ နောင်တရရန် ဘုရားသခင်သည် အလိုတော်ရှိသည် (ဟေယျကျေလ၊ ၁၃း၁၁)။ သို့သော် ဘုရားသခင်က သူ့ထံ အရှုံးပေးအပ်နှံရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို အတင်းအဓမ္မမခိုင်းစေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွေးချယ်မှုအပေါ်သူဆုံးဖြတ်မည့်အရာသည် သူနှင့်ထာဝရခွဲခွာခြင်းဖြစ်သည်။
ဤလောက၌ အသက်ရှင်ခြင်းသည် နောင်တမလွန်ဘဝအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပြုရန် စမ်းသပ် ခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများသည် သေရသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ဘုရားသခင်ရှိသော အရပ်၌ ထာဝရစိုးစံရမည်ဖြစ် ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်သောသူမည်ကဲ့သို့ ဖြစ်နိုင်၍ ထာဝရအသက်မည်ကဲ့သို့ ရရှိနိုင်မည် နည်း။ လမ်းတခုတည်းရှိပါသည်။ ၎င်းသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက ငါသည် ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း၊ အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်၏။ ငါ့ကိုယုံကြည်သော သူသည် သေလွန်သော်လည်းး ရှင်လိမ့်မည်။ ငါ့ကိုယုံကြည်၍အသက်ရှင်သောသူရှိသမျှတို့သည်လည်း သေခြင်းနှင့် အစဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည် (ယောဟန် ၁၁း၂၅ - ၂၆)။
ထာဝရအသက်ဆုကျေးဇူးတော်သည် လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် လောကီရေးရာပျော်ရွှင်မှုတချို့ကို ငြင်းပယ်ရန်လိုအပ်၍ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ မိမိကိုယ်ကို ဆက်ကပ်ရန်လိုအပ် သည်။ သားတော်ကိုယုံကြည်သော သူသည် ထာဝရအသက်ကို ရ၏။ သားတော်ကိုပယ်သော သူမူကား အသက်ကို မတွေ့ရ။ ထိုသူ၏အပေါ်၌ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်တည်နေသည် (ယောဟန်၊ ၃း၃၆)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သေလွန် ပြီးသည့်နောက် နောင်တရရန် အခွင့်အရေးရဦးမည်မဟုတ်ပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်ကို မျက်နှာချင်း ဆိုင်၍ တကြိမ်တည်းကျွနု်ပ်တို့သည် မြင်တွေ့မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွနုပ်တို့သည် တခြားရွေးချယ် ရန်မရှိ။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည် ရန်အတွက်သာလိုအပ်သည်။ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည ်ခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့် ဘုရားသခင်ထံလာရန်သူကအလိုတော်ရှိသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်ကိုဆန့် ကျင်မှုဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အတွက်အသေခံသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်လျှင် ယခုဘဝ၌ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အသက်တာ ပိုင် ဆိုင်ရုံသာမက ခရစ်တော်ရှိသောနေရာ အရပ်၌ ထာဝရ ကာလစိုးစံရလိမ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မိတ်ဆွေသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို မိမိကယ်တင်ရှင် အဖြစ် လက်ခံလိုလျှင် ဤသို့ဆုတောင်းပါ။ ယုံကြည်ခြင်းမပါပဲဆုတောင်းခြင်းသို့မဟုတ် တခြား ဆုတောင်းခြင်းက မိတ်ဆွေကိုမကယ်တင်နိုင် သည်ကိုမှတ်ထားပါ။ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းကသာ မိတ်ဆွေကိုအပြစ်နွံထဲမှ ကယ်တင်နိုင်ပါသည်။ ဤဆုတောင်းခြင်းသည် မိတ်ဆွေက ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားကြောင်းနှင့် သူပြင်ဆင်ပေးထားသော ကယ်တင်ခြင်းတရားအတွက် ကိုယ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောခြင်းဖြစ်သည်။ “ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်ကို ပြစ်မှားကြောင်းနှင့် ထိုအပြစ် တရားအတွက် တရားစီရင်ခြင်းပြစ်ဒဏ်ကို ကျွန်ုပ်သည် ခံထိုက်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါ၏။ ကျွန်ုပ်ခံထိုက်သော ပြစ်ကြွေးအားလုံးကို သခင်ယေရှုကယူဆောင်သွားခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လွှတ်ခြင်းအခွင့်ရပါ၏ ကျွနု်ပ်သည်အပြစ်ဒုစရိုက်နွံမှ ရုန်းထွက်၍ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ကိုယ့်တော့်ကို ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ကိုးစားပါ၏။ကိုယ်တော်၏အံ့ဖွယ်သောကျေးဇူးတော် တရားနှင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရား၊ထာဝရအ သက်ဆု ကျေးဇူးတော်အတွက် ကိုယ်တော်ကို ကျေးဇူးတင်ပါ၏! အာမင်!
ဤနေရာတွင်မိတ်ဆွေဖတ်ခဲ့သောအကြောင်းအရာကြေ ာင့် ခရစ်တော်ကိုလက်ခံရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲသလား? ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့လျှင်“ယနေ့ခရစ်တော်ကို ကျွနု်ပ်လက်ခံခဲ့ပါပြီ”ဟူသော စကားစုကို နှိပ်ပါ
Shwe Canaan TV: နောင်တမလွန်ဘဝရှိသလား?